Wiil Soomaali ah oo ku guuleystay abaalmarinta filimada BAFTA ee Britain – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wiil Soomaali ah oo ku guuleystay abaalmarinta filimada BAFTA ee Britain
Lonodon – Mareeg.com: Barkhad Abdi oo ah wiil Soomaali oo horay wax uga jilay filimka Mareykanka ah ee Captain Philips, kuna saabsanaa burcad badeedda Soomaaliya ayaa xalay ku guuleystay abaal marin laga bixiyo dalka Britain oo la siiyo dadka filimada jila laguna magacaabo “Abaalimarinta BAFTA”.
Barkhad Abdi oo ah wiil Somali Mareykan ah ayaa noqday ku guuleystay kaaliyaha jilaafii ugu fiicnaa sanadka filika Captain Philips, wuxuuna ka guuleystay rag caan ah sida: Bradley Cooper, Daniel Bruhl, Matt Damon iyo Michael Fassbender.
Markii uu fuulayay masraxa abaal marinta ayaa si aad ah loogu sacbiyay, waxaana wajigiisa ka muuqatay farxad weyn intii uu gudoomayay abaal marinta BAFTA.
Sidoo kale, Barkhad Abdi ayaa ku jira liiska tartamayaasha abaal marinta ugu weyn Aduunka ee Oscar ee Filimada Hollywood oo la qabanayo bisha March ee soo socota, waxaana la saadaalinayaa inuu guul weyn ka keeni doono abaal marintaas.
Waxaa uu noqonayaa Soomaaligii u horeeyay ee ku guuleystay Abaal marinta BAFTA oo ka mid ah kuwa caalamiga ee la siiyo aktarada aduunka.
Barkhad wuxuu ahaa atooraha labaad ee filim-ka Captain Phillips oo uu jilayay jilaaga caanka ah ee Maraykanka Tom Hanks.
Abaal marinta BAFTA ayaa laga bixiyaa dalka Britain sanad walba, iyadoo la siiyo aktarada iyo film soo saarayaasha Aflaamta aduunka, waxaana xafladaas ka qeyb galay dad magac ku leh aduunka oo u badan jilayaasha caanka ka ah Hollywood.
Barkhad ayaa ku dhashay Soomaaliya, hase ahaatee qoysiika ayuu ula huuray dalka Mareykanka oo hadda ku noolyahay.